ukuthengiswa okugudlayo kwezinhlanzi,kanjani ukwenza pellets izinhlanzi ezintantayo
Isingeniso seFleather Fish Pellet Mill
Uhlobo olomile lomshini we-pellet wezinhlanzi ezintantayo, okubizwa nangokuthi yi-fish feed pellet mill, isetshenziswa kabanzi ukukhiqiza izinto ezahlukahlukene zibe ngamaphakethe wezinhlanzi zasemanzini eziphezulu, inhlanzi eyikati, ama-shrimps, crab njll. Ama-pellets wokugcina wokudla anokwakheka okuhlukile nokunambitheka okuhle, ukondleka okuphezulu nokwenziwa bushelelezi. Okokuphakelwa kwezinhlanzi nezinhlanzi, isikhathi esintantayo kumanzi angaphezulu singalungiswa ngokulungiswa kwe-extrusion degree lapho kukhipha ama-pellets. Okwamanje, indishi yezinhlanzi ezintantayo isibe yindawo ekahle yepulazi lezinhlanzi elincane neliphakathi nendawo (inhlanzi eyikati, tilapia, i-shrimp njll.) abaphathi noma indawo yokuhlanza izinhlanzi.
Ukusebenza kwesisekelo se-Fish Pellet Mill
Asikho isidingo sokushisa ngaphandle komshini we-pellet wezinhlanzi ezintantayo, ngokusebenzisa isikulufa extruding impahla eluhlaza, ukushisa kukhiqizwa futhi kuqoqwe ngesikhathi senqubo yokusebenza ejikelezayo endaweni yomoya, nangesikhathi senqubo ephezulu yokuvuthwa kwezinga lokushisa, isitashi nefayibha yento eluhlaza iyavuvukala. Bese kuba ngaphansi kwesimo sokucindezela, impahla izokwakhiwa ibe ngamapellethi ngokubumba isikhunta. Ekugcineni, ngomfutho ophakeme okhiqizwa ngokujikeleza okujwayelekile kwesibazi, ngemuva kokusikwa umgadli ongaphambili ojikeleza njalo futhi ngesivinini esikhulu, imikhiqizo eqediwe izogcotshwa bese iba amabhola amancane akhukhumezayo ekushiseni kwegumbi nengcindezi.
Izinzuzo ze-Fish Pellet Mill Ezintantayo
● Isitoreji: ingagcinwa izinyanga ezimbili kuya kwezintathu lapho igcinwe endaweni eyomile emboziwe.
● Ukuhlanzeka: inqubo yokwanda ingasusa iningi lamagciwane. Okuqukethwe komswakama ophansi (mayelana 10%) kungavimbela ukukhula kwamagciwane.
● Ukudla okunempilo: ingangezwa nge-protein yezilwane noma yezitshalo, uwoyela wezinhlanzi noma amanye amafutha, kuyinkimbinkimbi yamavithamini namaminerali adingekayo ngezinhlobo ezithile zezinhlanzi. Inempilo kakhulu futhi ingathuthukisa ngempumelelo impilo yamasheya enhlanzi.
● Imithelela yemvelo: ukusebenzisa okuphakelayo kwepellet ngosayizi ofanele nobuningi kungokwehlisa inani lokulahleka futhi kunciphise kakhulu ukungcoliswa kwemvelo okubangelwa izinsalela zokuphakelayo.
Indlela Eqondile Yokuphakelwa
1. Ungondli ngokushesha okukhulu noma ngokweqile. Lokhu kudla imali futhi kungcolisa amapulazi ezinhlanzi.
2. Bheka ukuthi izinhlanzi ziphendula kanjani ekunikezeni ukudla bese zihlukaniselana ngendlela efanele. Ukusetshenziswa okuphansi kungaba uphawu lwezifo noma ukuwohloka kwekhwalithi yamanzi.
3. Kuhle ukunikeza okuphakelayo okuvamisile ngamanani amancane.
4. Uma usebenzisa i-pellet feed eyomile, cabanga ukuthi kufakwe umshini wokuzondla othomathikhi ukusindisa amandla.
5. Ukugcina irekhodi lokuphathwa kwamapulazi kusiza abalimi bezinhlanzi ukulawula izindleko nokukhetha indlela efanele yokuphatha. Kuyasiza ukubona ukuqubuka kwezifo okungenzeka ukuthi kwenzeka ekuqaleni kwesigaba.
Idatha Yobuchwepheshe Ye-Pellet Mill Yezintantayo
Ividiyo yokugobhoza kwenhlanzi pellet